Xaas Raadiye Program - Boga Wise Man
October 15, 2020 qawdhan
Wuxuu soo toosay isagoo werwersan.
Saacada ayuu eegay mise waa 3.37 PM. Wuxuu hurday laba saacadood. Isagoo dheelalawsan ayuu salaadii casar tukaday. Salaada markuu ka baxayba maskaxdiisii way kala degtay balse werwerkii kamuu bi’in.
Waxay ahayd maalin muhiim u ah Mukhtaar. Waa maalintii uu go’aanka ka gaadhi lahaa saddexdii hablood ee uu la sheekaysanayay. Mukhtaar wuxuu ahaa arday ku fiican koombiyuutarada sidaa awgeed wuxuu istusay in uu sameeyo program uu is barbardhiga saddexda hablood.
Si aanu u walaacin waxa uu go’aansaday in koombiyuutarku farriin u dirro labada hablood ee guuldaraysta. Farriin kasocota Mukhtaar oo sheegaysa in uu joojinayo xidhiidhkoodii.
Laptop-kiisii isagoo sita ayuu hoos uga soo degay qolkii uu ka deganaa albeerkada Time and Space. Miiskii uu jeclaa ayuu fadhiistay inkastoo cadceedu yara kululayd. Hadana Mukhtaar wuxuu ahaa bartii yaqaan oo meesha uu mar fadhiisto ayuu jeclaa in uu markalana fadhiisto.
Laptop-kii ayuu shiday. Internet-kii ayuu galay. Waxa uu eegay in wax email ah oo muhiim ahi usoo dhaceen. Kadibna program-kii hablaha kala saarayay ayuu furay ama load-gareeyey. Magaca program-ka waxa uu u bixiyey “Xaas Raadiye”.
Intaanu bilaabin inuu ku guro macluumaadkii uu hablaha kasoo ururiyey ayuu is yidhi horta maad is kululaysid ood coffee dalbatid.
“Farxaanaw” ayuu cod sare ugu dhawaaqay.
Mise daqiiqad kadib waa Farxaan oo talaabo dheeraynaya. “Ooob waa odaygii Mukhtaar oo maanta horaad usoo dhaadhacdee”.
“Haa Farxaan maanta hawl yar baan leeyahoo aan usoo degdegee ii waran”.
“Waala fiican yahay walaale maxaan kuu keenaa?”
“Cappuccino ii keen walaal iyo jeex keegii kaarootada ahaa”
“Keegaas Mukhtaaraw weli lama keenina laakiin mardhaw ayaa laynoo keenayaa walaal. Miyaan isku kaasoo raaciyaa mise cappuccino-aha ayaan kuu soo dedejiyaa?”
“May Farxaanaw isku mar ii keen walaal” intuu ku yidhi ayuu ku jeestay laptop-kiisii. Farxaana wuu fahmay oo wuxuu dib ugu noqday dhankii maqalka ee uu ka yimid.
Mukhtaar waxa uu shandadii laptop-ka siibadeeda sare kala soo baxay buug yar oo uu kolba ku qori jiray sifooyinka muhiimka ah ee gabadh kastaa leedahay.
Farsamada uu buuga wax ugu qoray ayaa ahayd mid inan kasta uu ka qiimaynayay laba dhinac ama dhinaceeda wanaagsan (togan ama positive) ama dhinaceeda xun (taban ama negative). Programku markaa waxa uu qiimaynayaa ama xisaabinayaa inankasta wanaageeda iyo xumaanteeda ama waxay ku liidato kadibna wuxuu siinayaa number. Hadhawna saddexda number ama tiro ta weyn ayaa guulaysanaysa.
Intuu dib ugu diirsaday kursiga ayuu dib u milicsaday barashadii inanta koobaad.
Inanta koobaad magaceedu wuxuu ahaa Ayaan. Mukhtaar wuxuu ku bartay Ayaan aroos. Isla markii uu arkayba ishaa kaga dhacday. Balse waxay ku dhex jirtay dumar yara waaweyn iyo ciyaal. Fursadii koobaad ee ay ku aaday dhanka dibada si ay telefanka ugu hadasho ayuu ka daba baxay. Wuu sugay intay dhamaysanaysay hadalkeeda markay dhigtay ayuu hor istaagay.
Way eegtay iyadoo filaysa inuu wax usheego. Isagoon la hadal ayuu eegay. Intay is hayn weyday ayay qososhay.
“ii banee waddada”
“haye numberkaaga ii qor”
“Caawoo dhan saasaan kuu hor taagnaan”
Mobilka ayuu soo saaray kadibna u dhiibay intuu password-ka ka saaray.
Ayaan iyadoo kalsoonidiisa ka heshay ayay oo dhoolacadaynaysa ayay u qortay numberka.
Mukhtaar iyo Ayaan barashadoodii waxa kasoo wareegtay siddeed bilood. Muddadaa dhexdeeda Mukhtaar waxa uu bartay labada hablood ee kale. Mukhtaar siduu u arkayay ama dadka kaleba haday arki lahaayeen ay qiri lahaayeen waxay ahayd in Ayaan qurux u dhalatay.
Weliba quruxda nooceeda wacan. Midab maariin ah, jidh soohan, indho waaweyn, timo dhaadheer oo uu habeenkaa arooska u bogay iyo dhoolacadayn markay muusooto eygu lafta dhigo. Dhanka kale Mukhtaar wuxuu ayaan u arkayay inay dhaqan fiican lahayd oo aanu wax maalayacni ah kala kulmin dhankeeda.
Markasta oo uu la balamo hadaanay mashquul ahayn way u iman jirtay. Markuu telafankeeda garaaco way ka qaban jirtay hal marna iyadoo meel buuqa joogta kamay qaban telefanka. Waxase Mukhtaar aan u cuntamin in Ayaan ahayd inan aan sheekada aqoon oo iska aamus badan. Haduu maantoo dhan u sheekeeyo way ka gurtaa kolna way qososhaa balse badanka waxay ku darsataaba muu badnayn. Mukhtaar wuxuu is odhan jiray hadada guursato bilee maalin uun intay eegto uun iska dhaqaaqdaa sidii ku dhacday saaxiibkiisii gabadha quruxda badan guursaday. Ku darsoo Ayaan waa ardayad jaamacadeed oo dhigata xisaabta.
Waxa uu soo saaray qiimayntii Ayaan.
1. Qurux 90%.
2. Daacadnimo 69%.
3. Is-fahan 15%.
4. Dhego-nugayl 80%.
Lasoco qaybaha 2 aad iyo Saddexaad. ….
caqli dumar Hargeisa haween Jacayl Sheeko Somaliland
Previous Post Duufaanada Siyaasadeed Ee Ku Xeeran Dalka.
Next Post Taariikhda Burburka Somaliland. Qaybta 1aad..
Cali Ibraahim says: